ခိုးမှုထောင်သားက မုဒိမ်းမှုထောင်သားကို ထောင်တွင်းမှာချွန်​ထက်​​သောအရာဖြင့်​ထိုးသတ်...! - Thadin
HomeNEWSခိုးမှုထောင်သားက မုဒိမ်းမှုထောင်သားကို ထောင်တွင်းမှာချွန်​ထက်​​သောအရာဖြင့်​ထိုးသတ်…!
March 16, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on ခိုးမှုထောင်သားက မုဒိမ်းမှုထောင်သားကို ထောင်တွင်းမှာချွန်​ထက်​​သောအရာဖြင့်​ထိုးသတ်…!
မြောင်းမြအကျဉ်း​ထောင်​​တွင်းထောင်​သားအချင်းချင်းလူသတ်​မှုဖြစ်​ ။ ​မြောင်းမြ မတ်​လ ၁၅ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး.​မြောင်းမြမြို့အကျဉ်း​ထောင်​ထဲတွင်​.ခိုးမှု​ပေါင်းများစွာဖြင့်​​ထောင်​(၁၅)နှစ်​ကျ​နေသူထွန်းထွန်းဦး.ခ.ဘွတ်​ကလုံ.ခ.ချစ်​ရ​အောင်​.၂၂.နှစ်​.ဘ.ဦးသိန်းထွန်း.
မွောငျးမွအကဉျြး​ထောငျ​​တှငျးထောငျ​သားအခငျြးခငျြးလူသတျ​မှုဖွဈ​ ။ ​မွောငျးမွ မတျ​လ ၁၅ဧရာဝတီတိုငျး​ဒသေကွီး.​မွောငျးမွမွို့အကဉျြး​ထောငျ​ထဲတှငျ​.ခိုးမှု​ပေါငျးမြားစှာဖွငျ့​​ထောငျ​(၁၅)နှဈ​ကြ​နသေူထှနျးထှနျးဦး.ခ.ဘှတျ​ကလုံ.ခ.ခဈြ​ရ​အောငျ​.၂၂.နှဈ​.ဘ.ဦးသိနျးထှနျး.
This Month : 42745
This Year : 238143
Total Users : 597167
Total views : 2745835